China Inja Iimpahla Ekwindla nasebusika kuguqulwe kwaba liCandelo eliCekeceke Teddy Bichon Hiromi Poodle Izambatho zePuppy Ihembe elinemilenze emine ihembe elinxibayo iWukong Pet Coat mveliso kunye nabenzi | UMiaSein
Iimpahla zeenja ezinemilenze emine iRaincoat yeNja encinci uTeddy Bic ...
Iimpahla zeenja Ekwindla nasebusika ziguqulwe zaba liCandelo eliNciphileyo uTeddy Bichon Hiromi Poodle Isinxibo sePuppy Ihembe elinemilenze emine Ihempe yokunxiba iWukong Pet Coat
Igama lemveliso: Iimpahla zeenja Ekwindla nasebusika ziguqulwe zaba liCandelo eliNciphileyo uTeddy Bichon Hiromi Poodle Isinxibo sePuppy Ihembe elinemilenze emine Ihempe yokunxiba iWukong Pet Coat
Inkcazo:Khetha amalaphu e-boutique ekumgangatho ophezulu ukuzisa izilwanyana zasekhaya amava okunxiba kakuhle, kwaye ucoce umsebenzi wokwenza imikhono inxibe ngokwendalo, intle ngakumbi kwaye inemfashini
Igama lomxholo: Impahla yezilwanyana
Uhlobo: Icandelo elincinci, icandelo elincinci
Ubukhulu (nge-cm): I-S-bust 30-35cm, M-bust 35-40cm, L-bust 40-45cm, XL-bust 45-50cm
Phawu: Ukuhombisa, ukufudumala
Uhlobo lwengubo: Mfutshane
Indlela yokuhlamba: Unokuhlamba iimpahla zenja ngezinto zokucoca iimpahla zabantu. Ukuba isilwanyana sineentsholongwane ezizodwa ezinokufumaneka kwizilwanyana zasekhaya, kuya kuba luncedo ngakumbi ukubulala amaqanda e-parasite angcoliswe lula zizambatho zezilwanyana zasekhaya. Impahla yenja kunye neyabantu kufuneka ihlanjwe ngokwahlukeneyo. Sukusebenzisa i-chlorine bleach okanye i-oxygen bleach.
Indlela yokugcina: Kuphephe ukunxibelelana namanqaku abukhali kunye arhabaxa kunye nezinto ezinamandla zealkali; khetha indawo epholileyo kunye nomoya opholileyo kwaye owomileyo ngaphambi kokuqokelelwa; vula ikhabhathi rhoqo ngexesha lokuqokelela ukuze ungene kwaye uhlale womile; kubushushu obuphezulu nakwixesha elinomswakama, umoya womile amatyeli amaninzi ukunqanda ukungunda.
Uhlobo lwesitokhwe: Ikhona kwisitokhwe
Nceda uqaphele: Le mveliso iyilelwe kwaye yaveliswa yinkampani yethu ekhethekileyo. Le mveliso ayixhasi ulwenziwo. Ukwenzela ukuba inja ibe namava amahle okunxiba, nceda ulinganise umjikelo wentamo yenja, isangqa sentamo, ubude bomqolo kunye nolunye ulwazi oluyimfuneko. Ukucoca kunye nokugcina ngokungqongqo ngokucoca kunye neendlela zokugcina. Le mveliso icekeceke kakhulu, ke sukuyibeka kwizinto ezibukhali. Ukuba isilwanyana siziva singonwabanga emva kokunxiba, nceda usisuse ngokukhawuleza ukunqanda iingozi ezinje ngokulimala kwesilwanyana. Emva kokunxiba, nceda ukhulule iqhosha rhoqo ukuze ulusu lwesilwanyana luphefumle, ukuthintela ukuphembelela ukukhula kweenwele zezilwanyana zasekhaya okanye i-causinisifo sesikhumba ngenxa yokutya. Ukuba awonelisekanga yile mveliso, nceda unxibelelane nenkonzo yabathengi.
Egqithileyo Umzi Pet Pet Cat Izinwele weplishi Izinwele isicoci Ikhaphethi Ibhedi usofa Izinwele Ukususwa
Okulandelayo: Isilwanyana sasekhaya Ikati elula iDisk kunye neTeyibhile yeKati yeTafile Ikati yeKati yeKati yabantu abadala Ikhephu elipholileyo Ikati encinci yeTafile yeKati
ICaramel Macchiato Inja encinci yomqamelo wekati
Inja yekati yeBath Brush Iiglavu ezinkulu zeBath Bath
Pet Products Inja Kama Massage Handle Steel Kama ...
Iikati zasekhaya iikati kunye neenwele ziyasula iinwele ...
Pet Cat Iimpahla ekwindla nasebusika Iimpahla ezimnandi ...
Ibhulukhwe yenja yabasetyhini i-Teddy Golden Woo ...